SF စီးရီး သတ္တု/တွန်းဆွဲ
ST စီးရီး သတ္တု/ချည်မျှင်
SP စီးရီး ပလတ်စတစ်/ချည်မျှင်
SY စီးရီး ပလတ်စတစ်/လှံစွပ်
WAC3 စီးရီး ပလတ်စတစ်
RJ45 Series-Ether ပိုက်ကွန်
WP စီးရီး Bayonet
WL စီးရီး သတ္တု/ချည်မျှင်
WD စီးရီး သတ္တု/ချည်မျှင်
WS စီးရီးအတွက် မိုးလုံလေလုံအတွက်သာ
WF စီးရီး သတ္တု/ချည်မျှင်
WY စီးရီး သတ္တု/လှံစွပ်
CEE 63A IP67 ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
CEE 125A IP67 ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
ဘယ်စျေးအသက်သာဆုံး ရေစိုခံ ပလပ်ပေါက် ထုတ်လုပ်သူလဲ။
ထုတ်ကုန်များဝယ်ယူရန်သေချာပါသည်။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်ကုန်ဆန့်ကျင်ဘက်များရှိသည်။ရေစိုခံပလပ်များတွင်၊ ရေစိုခံပလပ်များထုတ်လုပ်သူတွင်၊ တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်း၏စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဥ်ညှိနှိုင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တိုင်ပင်ရန်လိုသေးသည်...
ရေစိုခံချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။
admin မှ 22-05-16 ရက်နေ့တွင်
လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ လူတို့၏ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်မှာလည်း တိုးမြင့်လာပါသည်။Connectors များကို ဘဝတွင် ဆားကစ်များ သို့မဟုတ် အချက်ပြမှုများကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့ကို လူများက မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ အများသူငှာနေရာများ၊ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ကွဲလွဲမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်...
A. အဆက်အသွယ်အပိုင်းသည် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို အပြီးသတ်ရန် လေကြောင်းပလပ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့် အဆက်အသွယ်ကို အမျိုးသား အဆက်အသွယ် အပိုင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး လျှပ်စစ် ချိတ်ဆက်မှုကို အမျိုးသမီး အဆက်အသွယ် အပိုင်းနှင့် အမျိုးသား ပေါင်းစပ်မှုတို့ ဖြင့် ပြီးမြောက်သည် ။
လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို တိကျမှန်ကန်စွာ ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာကိုရွေးချယ်သည့်အခါ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်လျော်သောလျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာသည်အားစိုက်ထုတ်မှုထက်ဝက်ဖြင့်ရလဒ် ၂ ဆဆောင်နိုင်သောကြောင့်သတိပြုရန်အချက်အချို့လည်းရှိသည်။သင့်လျော်သောလျှပ်စစ်ကြိုးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ...
ဤဆောင်းပါးသည် လေကြောင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို နားလည်စေပါသည်။
admin မှ 22-04-05 ရက်နေ့
Connector သည် အလွန်အသုံးများသော ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။လေကြောင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာသည် အလွန်အသုံးများသော အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းလူများက လေကြောင်းပလပ်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို yin နှင့် yang အဆက်အသွယ်နှစ်ခုဖြင့် မကြာခဏ ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း လေကြောင်းပလပ်သည် အထူးဖြစ်သည်၊ လေကြောင်းပလပ်အားလုံးမဟုတ်ပေ။
အီလက်ထရွန်းနစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ လေကြောင်းပလပ်များ၊ အဆက်အသွယ်များအတွက် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများ
အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်း အမျိုးအစား အနည်းငယ် ရှိပြီး အီလက်ထရွန်းနစ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများသည် အသုံးအများဆုံး ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းတွင်းရှိ လူအများအပြားသည် ၎င်းတို့အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးအနှုန်းဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြသည်။အမျိုးသားစံနှုန်း GB4210-84 သည် အမျိုးမျိုးသော အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို တိကျစွာဖော်ပြသည်...
စစ်ဘက်လေကြောင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း။
စစ်ဘက်လေကြောင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ဆားကစ်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဆားကစ်များကို ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ဆားကစ်၏ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်၍ လုံလောက်သောအသိပညာရှိသင့်သည်။ယနေ့တွင် Xiaobian သည် ၎င်း၏ရွေးချယ်မှု၊ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှင့် prec...
1. ချိတ်ဆက်ကိရိယာများဟုလည်း ခေါ်သော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပါဝါစက်ပစ္စည်းများတွင် အဆင်ပြေသော လျှပ်စစ်ပလပ်အင်ချိတ်ဆက်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။၎င်းတို့ကို အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး ele ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ကေဘယ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် စက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကြား ခြားနားချက်။
ကြိုးများသည် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ပိုမိုထူးခြားသော coaxial connector ဖြင့် မပြီးဆုံးပါက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က များစွာလုပ်ဆောင်လေ့မရှိပါ။coaxial connector သည် ကေဘယ်တစ်ခုအား အခြားကြိုးတစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန် သို့မဟုတ် စက်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ဒါကြောင့် ချိတ်ဆက်တဲ့ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါတယ်- ကေဘယ်ကိုသွားမယ့် ကြိုးနဲ့ t ကိုသွားမယ့် အမျိုးအစား နှစ်ခုရှိပါတယ်။
Weipu Electric Co., Ltd ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ပြုပါသည်။
20-05-12 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Guangzhou Weipu စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်စက်မှုချိတ်ဆက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်မှုတွင်အထူးပြုသည်။နှစ်များတစ်လျှောက် စုဆောင်းထားသော ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံများက Weipu သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနယ်ပယ်တွင် ထူးချွန်သော လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Weipu သည် &#...
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကေဘယ်လ်လုပ်ငန်းသည် အရှိန်မြင့်သည့်ကာလမှ တည်ငြိမ်သောကာလအထိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။
ကြေးနန်းနှင့် ကေဘယ်လ်လုပ်ငန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုတွင် အရေးပါသော ပံ့ပိုးပေးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏ လေးပုံတစ်ပုံကို တွက်ချက်ထားသည့် ဓာတ်အားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ထောက်ပံ့ပေးသည်။၎င်းသည် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်း...
အနာဂတ်တွင် LED မီးထွန်းလုပ်ငန်း၏ ခေတ်ရေစီးကြောင်းသုံးခု
ပြည်တွင်း LED စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အလုံးစုံ ကြံ့ခိုင်တိုးတက်မှုနှင့် အစိုးရမူဝါဒများ၏ အခွင့်သာသော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတို့ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ LED လုပ်ငန်းသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဆက်လက်ပူနွေးလာခဲ့ပြီး အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးပိုင်းအရ ကောင်းမွန်သောလမ်းကြောင်းကို ပြသခဲ့သည်။တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအချို့က ခန့်မှန်းထားသည်...
စျေးအသက်သာဆုံး ရေစိုခံ P...
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက်က ဘယ်မှာလဲ...
ဒီဆောင်းပါးက stru ကိုနားလည်စေတယ်...